Fifandraisana lavitra: fitiavana amin'ny fitsapana azo ampiharina
Tsy fahita matetika ny fikarohana ataon'ny mpiara-miasa - indrindra rehefa mitady mpiara-miasa amin'ny Internet na masoivohom-pihavanana - hiafara amin'ny fifandraisana lavitra, farafaharatsiny ho an'ny fiandohan'ny fiarahana.
Fifandraisana lavitra: fitiavana misy tombony sy fatiantoka
Ny zava-misy atolotry ny Internet fotoana betsaka kokoa hahafantarana olon-tiana noho ny trano fivarotana any an-tanàna dia mety ho tombony sy fatiantoka.
Tombony 1: Fotoana betsaka hikolokoloana ny finamanana
Amin'ny fifandraisana lavitra, matetika dia mifankahita isaky ny faran'ny herinandro hafa fotsiny ianao, indraindray aza tsy dia matetika loatra. Noho izany dia mandehandeha ianao mandritra ny herinandro tsy misy ny vadinao. Na dia ao anaty fifandraisana vaovao aza ianao dia tsy miraharaha ny finamanana amin'ny voalohany, dia hohamafisinao matetika amin'ny fifandraisana lavitra mba hanonerana ny tsy fisian'ny mpiara-miasa. "Fifandraisana lavitra: fitiavana amin'ny fitsapana azo ampiharina" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 11. September 2020 3. March 2021 Sokajy Fiaraha-miasa & izahoKeywords fifandraisana, fifandraisana lavitra, Liebe, fiaraha-miasaLeave a Comment amin'ny fifandraisana lavitra: fitiavana miaraka amin'ny fitsapana azo ampiharina
Fotoana ho an'ny roa - ray aman-dreny fa koa mpiara-miasa
Tsy voatery ho ny fahita lavitra sy ny ady amin'ny fandaharana mamaritra ny hariva no tokony ho izy. Misy zavatra lehibe azonao atao miaraka aorian'ny andro lava any am-piasana. Ny fientanam-po na ny fialan-tsasatra, ny endrika fanaovana fialamboly amin'ny hariva, amin'ny faran'ny herinandro sy amin'ny fialantsasatra ampahibemaso dia mahomby sy mandrisika ary miara-milamina.
Fahafinaretana amin'ny sakafo ao an-trano
Mahatsiaro te hihinana ve ianao, nefa tsy mahandro ny tenanao, manolotra pizza ary mivoaka hisakafo? Manampy ny mahandro mpanofa. Mpahandro iray manofa no mametaka menio marobe ao an-dakozia an-trano. Mifanakalo hevitra aminy ianao ny amin'ny lovia, fanombohana, fampianarana lehibe ary tsindrin-tsakafo ary daty mety.
Fotoana ho an'ny roa - Sary avy amin'i Werner Heiber amin'ny pixel
Ny chef manofa dia mividy ny zava-drehetra ary mitondra ny entany miaraka aminy koa raha tsy misy ao an-trano. Manamboatra lovia ao an-dakozia izy ary manolotra azy ireo amin'ny fomba amin'ny latabatra tsara tarehy nomaniny. Ny chef manofa dia manala ireo takelaka banga aorian'ny fampianarana, mameno ny divay na zava-pisotro hafa ary manamboatra lakozia indray. Manjavona tsy misy soritra intsony rehefa vita ny asa. "Fotoana ho an'ny roa - ray aman-dreny nefa koa mpiara-miasa" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 11. September 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy freetime sy fanatanjahan-tena, Fiaraha-miasa & izahoKeywords fialam-boly, fiaraha-mientana, fiaraha-miombon'antoka, Chef manofa, fiaraha-miasa, Sturgeon mahandro, fotoana iarahanaLeave a Comment indraindray ho an'ny roa - ray aman-dreny fa koa mpiara-miasa